All dalxiisayaashu way riyoodaan ku saabsan booqashada dhagaxyada qarsoon ee Yurub iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Yurub. photo A iyaga ka mid ah si farxad leh oo ag taagan Taallada Eiffel, Colosseum ama Big Ben ka dhigaysa qof kasta dareemo gaar ah (oo aan gebi ahaanba u hesho in!). Haddii aad tahay Instagram addict ama a "run" socotada, meelaha socday daafaha dunida waa wax walba!
FIIRO GAAR AH: Hadaad ka fikirayso socday bas oo ay kasoo horjeeddo socday tareen – doorashada waa in mar walba tareen.
Waxa ugu horeeya ee aad ka fikirto marka ay ka hadlayaan Luxembourg waa bangiyada. Wadankaas ayaa waxa uu si fiican u yaqaan si sax ah, sababtoo ah iyaga ka mid ah. Laakiin Luxembourg ayaa steepled kaniisadaha, guryo dhagax ah, kanaallada yaryarna waxay ka dhigayaan booqashadiisa mid ka raaxeysan intaad filan lahayd. Taasi waa sababta meeshan waa mid ka mid ah dhagaxyo qarsoon dhif in Europe ka mid ah caasimadaha qaaradda this ee. Waa meel qurux badan, dhigay barta halkaas oo webiyaasha Petrusse iyo Alzette kulmaan. Waxaad booqan kartaa qaar ka mid ah maqaayadaha iyo baararka hip u dhow barxadda dhexe. Intaa waxaa dheer, kabsarta Philippe II ayaa farabadan of dukaamada, si fiican diyaar u ah inay qaataan a, anagana yar aad noqon! dhammaantiisba Luxembourg waa meel fiican ee a taataabtay isbuucii.
Kaliya 45 daqiiqo oo uu tareenku ka fog Genoa, this magaalada kalluumaysatada yar ma laha wax badan oo waajib-arkaa. Si kastaba ha ahaatee, badan sida kuwa ameelaha derrated in soo baxayso in dhagaxyo qarsoon oo run Europe, this mid aad u waa in aad liiska. Iyada oo leh guryaha midabka leh iyo jidad dhaadheer, Camogli waa meel kaamil ah si ay u tagaan socod dheer. Socodka iyada oo Camogli, aad ka ogaan doonto hotels, malana, dhismayaasha qadiimka ah, iyo dubayaasha yar. Ka hor inta aadan u ogaado – waxaad u dhici doonaa jacayl meeshan la! Oo markay aad u hesho daalay marayay agagaarka, waxba ma jirto ka khayr badan isagoo qado in qaar ka mid ah maqaayadaha magaalada. waqti A kaamil ah si ay u booqdaan Camogli noqon lahaa May, inta lagu guda jiro kalluunka Dabaaldag. soo jiidashada ugu weyn ee ay dhacdo tani waa digsiga 28-ton ah. Waxa loo isticmaalaa, xaq aad u qiyaasay, kalluun karinta.
Way adag tahay in la tixgeliyo mid ka mid ah dhagaxyo qarsoon ee Europe marka aad fossils xayawaan qiroweyn kuu dhow. Yup, xaq baad u akhridaa. fossils xayawaan qiroweyn waxaa laga heli karaa xeebta Jacka Weymouth. weli, ma dad badan ay go'aansadaan in ay qaataan 3-saac tareen kortaan ka London si ay u arkaan. Oo ah kuwa ka samayn ku raaxaysan karaan oo kala duwan watersports oo ay leeyihiin kalluunka iyo chips xeebta. Ama doorato hadhuudh ah qaar ka mid ah gastropubs ah. Tan iyo pound waa wax yar hoos xilligan, waa waqtiga saxda ah si ay u sameeyaan safar si England. Waqtiga saxda ah ee booqashada Weymouth wuxuu noqon lahaa Ogosto inta lagu jiro Weymouth damaashaad.
Ma waxaan ka caawiyo go'aan oo meel ay u soo socda booqan on adventures aad soo socda? Good! Kuwani shan meelo waa uun tusaale ka mid ah sida ay wali jiraan qaar ay noqdaan Flop ogeyn iyo waxa la qariyey in Europe. dunida waa mid la yaab leh oo sugaya in aad u ogaado. Ku safrid tareen waxay kuu ogolaanaysaa inaad meelahan ka aragto xagal kale. Sidoo kale, aad safar dheeraad ah oo ku raaxaysan doonaa. Haddii aad u baahan tahay caawin qorshaynta safarka, ama aad rabto in aad ka iibsan tikidhada, fadlan nala soo booqdaan SaveATrain.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)